के हो 'कार्डिएक अरेस्ट'? - BBC News नेपाली
के हो 'कार्डिएक अरेस्ट'?
बलिवूडकी चर्चित अभिनेत्री श्रीदेवीको कार्डिएक अरेस्टका कारण दुबईमा निधन भएको बताइएको छ। नेपालमा पनि हालैका वर्षमा कार्डिएक अरेस्टको समस्या देखिने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। यसै सन्दर्भमा हामीले वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान् कोइरालालाई सबभन्दा पहिला सोधेका थियौँ- कार्डिएक अरेस्ट भनेको के हो?
Image caption बलिवूडकी चर्चित अभिनेत्री श्रीदेवीको 'कार्डिएक अरेस्ट'का कारण गएराति दुबाईमा निधन भएको छ।
त्यसबाहेक उमेर सँग-सँगै केही जोखिमहरू आउन सक्छन् र अनुवांशिक कारणले आउने जोखिमलाई हामीले झेल्ने हो। केही परिहालेमा त्यसलाई तदारूकताका साथ उपचारको विधिमा लैजान सकिन्छ। तपाईँ हामीले चिनेका व्यक्तिहरूको मृत्युको पछाडिका कुलत जस्ता के-के जोखिम थिए भनेर हामीले अध्ययन गरेका हुँदैनौँ। खाली अचानक मृत्यु भयो भन्ने मात्र सुन्छौँ। त्यसैले जीवनशैली पो खराब थियो कि भनेर पनि जान्नुपर्छ। आफ्ना जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न आजैदेखि सचेत हुन म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसो गरे मात्रै हामी अप्रत्याशित मृत्युहरूलाई कम गर्न सक्छौँ।